'सरकारबाट निषेधको राजनीति भयो, सभामुखले... :: मनोज सत्याल :: Setopati
'सरकारबाट निषेधको राजनीति भयो, सभामुखले जालझेल गरे'
मनोज सत्याल काठमाडौं, माघ ११
प्रतिपक्षीको अवरोधबीच जबर्जस्ती चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिनुलाई नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारबाट 'निषेध राजनीतिको प्रारम्भ' र सभामुखको 'जालझेलपूर्ण व्यवहार' भनी टिप्पणी गरेका छन्।
संसद बैठकपछि संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै उनले यो विधेयक पारित हुनुलाई तीन तरिकाबाट व्याख्या गरे।
उनको पहिलो व्याख्या सरकारको सन्दर्भमा थियो।
'प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लगातार उठाएको विषयमा सरकारबाट संवादको निम्ति सामान्य प्रयत्न पनि भएन,' उनले भने, 'सदन अवरोध गरेर उिभइरहेको प्रतिपक्षलाई निषेध गर्ने सरकारले मसँग दुईतिहाइ बहुमत छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ। मसँग असहमति राख्नेलाई म चिन्दिनँ, उनीहरूको कुरा म मान्दिनँ भन्ने सन्देश दिएको छ। यो निषेधको राजनीतिको प्रारम्भ हो।'
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराको व्यवहारको पनि सांसद थापाले आलोचना गरे। महराले सभामुखका रूपमा निष्पक्ष व्यवहार देखाउन नसकेको र सत्तापक्षको आदेशपालकजस्तो रवैया देखाएको थापाले बताए।
'सभामुखले आग्रहबाट मुक्त भएर व्यवहार गर्न सक्नुभएन। त्योभन्दा ठूलो कुरा, आजको बैठकमा उहाँले जालझेलपूर्ण व्यवहार देखाउनुभयो,' थापाले भने, 'उहाँले बैठक सुरू हुनुअघि निकास निकाल्छु, कम्तीमा मुठभेड हुन दिन्नँ भन्नुभएको थियो। तर, सदनमा आएर उल्टो व्यवहार देखाउनुभयो।'
सरकारले विभिन्न मञ्चहरूबाट दिएको आदेश पालना गरेर सभामुखले आदेशपालकको भूमिका खेलेको उनले टिप्पणी गरे।
'म आजको बैठकमा सरकारभन्दा सभामुखको तर्फबाट बढी गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार भएको मान्छु। उहाँले चाहनुभएको भए आज विधेयकमा प्रवेश नगरेर मुठभेड टार्न सक्नुहुन्थ्यो। शुक्रबारको दिन भएकाले उहाँलाई विधेयक पास गराउनैपर्ने बाध्यता थिएन। सदनको नियम ११ बमोजिम शुक्रबारको दिन विधेयकमा छलफल हुँदैन। उहाँले यही प्रावधान प्रयोग गरेर आजको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक नउठाउन पनि सक्नुहुन्थ्यो। तर, उहाँ सरकारको आदेशपालक भएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुनुभयो,' थापाले भने।
थापाको तेस्रो व्याख्या सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौताका सन्दर्भमा थियो।
आफूसँग गरेका सम्झौताविपरीतका प्रावधान घुसाएर विधेयक ल्याइएको भन्दै डा. केसी १६ औं अनसन बसेका छन्। शुक्रबार अनसनको १७ औं दिन हो। केसी अनसन र उनीसँग आफैंले गरेका सम्झौताविपरीतका प्रावधानसहितको विधेयक सरकारले ताली बजाएर पास गरेकोमा थापाले आपत्ति जनाए।
'यो विधेयकमा केसीसँग गरिएका सम्झौताको ९५ प्रतिशत समेटिएको सरकारको भनाइ छ,' उनले भने, 'यसको मतलब बाँकी ५ प्रतिशतका लागि प्रतिपक्षीसँग मुठभेड गर्न र एक सत्याग्रही डाक्टरको जीवनसँग खेलवाड गर्न सरकार तयार भयो।'
'त्यो ५ प्रतिशत कसका लागि बाँकी राखिएको हो? केही अमूक मेडिकल व्यवसायीहरूको स्वार्थ पूरा गर्न,' उनले भने।
त्यस्तै, कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अधिनायकवादी शैलीमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको बताएका छन्। उनले केपी शर्मा ओली सरकारले अधिनायकवादी शैलीमा विधेयक पारित गर्न खोज्दा सभामुखले पनि त्यसमा थप भूमिका खेलेको आरोप लगाए।
‘वेल घेराउ हुँदाहुँदै अधिनायकवादी शैलीमा विधेयक पारित भयो, सभामुखले पदको गरिमा नै राख्न सक्नुभएन, मलाई दु:ख लागेको छ,’ बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै देउवाले भने।
उनले सरकार कांग्रेसले गरेका सबै काम मेट्न लागेको बताए। यसअघि कांग्रेसको अवरोधबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले रोष्ट्रममा पुगेर विधेयक पेश गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमा कुनै छलफल नै नगरी विधेयक पारित भएको हो।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ११, २०७५, १५:२४:००
सानैमा बिहे गरेकी दुलही लिन जाने हतारमा विपीन कार्की
बामदेवले भने- बर्दियामा भन्दा पोखरामा मतान्तर कम छ, म चुनाव उठ्दिनँ